Uchwepheshe we-Semalt: Ukuvimbela kanjani izikhangiso Ezenzweni ze-Android, Amageyimu Neziphequluli
Izikhangiso zibe yizimbi ezidingekayo, futhi izinhlelo ezihlukahlukene namawebhusayithi ahlinzeka ngesofthiwe yamahhala, okuqukethwe okukhululekile, nezinsizakalo zamahhala ngoba abakhangisi bayabakhokha. Ngakho-ke, abahlinzeki benkonzo kufanele bahambise izikhangiso kuzivakashi zabo futhi bavelise izimali zokuzigcina ezweni lebhizinisi isikhathi eside. Bakudinga imali engenayo yokubamba iqhaza kanye nezinsizakalo zesizinda kanye nokuthuthukiswa - curso de fotografia digital nikon gratis. Abasebenzisi bavuna izinzuzo zokusebenzisa imikhiqizo yabo mahhala. Noma kunjalo, ukubeka isikhangiso kubangele futhi kubambelele ekuhlangenwe nakho okungekho okukhangayo komsebenzisi.
Lapha uMichael Brown, ochwepheshe bephezulu Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, uzokutshela ezinye izindlela zokuvimbela izikhangiso kudivayisi yakho ye-Android.
Ungavimbela kalula inombolo enkulu yezikhangisi ukuba zingabonakali emidlalweni yakho nasezintheni zokusebenza, kanye neziphequluli zakho. Sithemba ukuthi lezi zindlela zizosebenza kuwo wonke amadivaysi angagxiliwe futhi azinzile, kodwa ngaphambi kokuba siqale, kufanele ube neMphathi wefayela njenge-Astro File Manager. Abanye abaphathi befayela bangasetshenziswa futhi, kodwa kufanele uzame ukuvimbela izikhangiso ezingozini zakho. Asiwona obhekene nanoma yimiphi imiphumela emibi kudivayisi yakho ye-Android.
Kulendlela, uzosebenzisa izikhangiso (izicelo) zokuvimbela zonke izikhangiso kudivayisi yakho ye-Android, njengezikhangiso eziboniswa emidlalweni ehlukene nezinhlelo zokusebenza. Ngokujabulisayo, kunezikhangiso ezihlukahlukene zokukhangisa kubasebenzisi be-Android nabathuthukisi bezinhlelo zokusebenza..Okuhle kakhulu, kodwa yi-AdAway ne-Adblock Plus (ABP). Ungakwazi ukufaka noma iyiphi yalezi zinhlelo ngokuya ngezidingo zakho kanye nokulindela. Uma ufuna ukuvimbela izikhangiso nge-Adblock Plus, ake ngikutshele ukuthi lolu hlelo luvulekile futhi lukwazi ukuvumela izikhangiso ezingenakusiza. Le ndlela ifaneleka kokubili amadivaysi angagxiliwe futhi axhunyiwe. Ungakwazi ukufaka kalula uhlelo lokusebenza lokulondoloza isikhangiso kudivayisi yakho, kodwa ukulayisha okuhlangene kuyadingeka njalo njengoba i-Google isanda kususwa zonke izinhlelo zokusebenza zokuvimba isikhangiso kusuka ku-Google Play Isitolo.
Indlela # 2. Vimbela lezi zikhangiso ngefayela 'elisha'
Ungakwazi ukuvimbela kalula zonke izikhangiso ezingadingeki usebenzisa ifayela lokusingatha. Le ndlela ikuvumela ukuthi uvimbele inombolo enkulu yezikhangiso kudivayisi yakho ye-Android futhi usebenze kumadivayisi asuselwe kuphela. Ifayela lokusingatha lifayela elififi ohlelweni lwakho lokusebenza. Uma ufuna ukuqala isayithi usebenzisa igama layo lomsingisi, uhlelo lwayo lokusebenza luzosesesha lelo fayela lendawo yokusingatha ukuze lihlole ikheli le-IP elihambelanayo. Uma iphumelela, ikheli le-IP elimeziwe lizosetshenziswa. Uma kungenjalo, i-DNS (Domain Name Service) izothola umbuzo mayelana nokuthi ungathola kanjani IP yegama lomkhosi. Ungakwazi kalula ukusetha ifayela le-host. Ngenxa yalokhu, kufanele uhambe ku-MVPs kusiphequluli lapho ifayela elivulekile lizovuleka khona. Yilondoloze kukhompyutheni yakho futhi kamuva kopisha ifayela lesikhamuzi kuyo kuya kudivayisi yakho ye-Android.
Ungakhohlwa ukuqaphela indlela yefayela. Kudivayisi yakho ye-Android, kufanele uvule imenenja yefayela uphinde ukopishe ifayela lesikhamuzi kuleyo ndawo.
Kuyiqiniso ukuthi izikhangiso zicasula futhi zicasula, kodwa ziyindlela enhle yokwazi ngemikhiqizo yakamuva, amasevisi, amawebhusayithi, kanye nezinhlelo zokusebenza. Kufanele uvumele izikhangiso ezingenakunyakazo ziboniswe ukuze zibe nombono walokho okuhamba phambili kulezi zinsuku. Ngaphandle kwalokho, ungasebenzisa izinhlelo zokusebenza ezikhokhelwe ukumisa lezo zikhangiso ezikucasulayo kwi-intanethi.